Semalt: SEO मार्केटिंगमा नयाँ प्रवृत्ति
इभान कोनोवालोभ, Semalt विज्ञ भन्छन् कि एआई कार्यान्वयन गर्नाले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पाउने सम्भावना बढ्छ, र यो उन्नत दृश्य, हाइपर-लोकल र आवाज खोजीका कारण हुन सक्छ। तर अझै, हामी एआई को फाइदाहरूको बारेमा जति धेरै सचेत हुन्छौं, खुद्रा ब्यापारमा यसको परिचय एक वास्तविक चुनौतीमा परिणत हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, केभिन बोबोव्स्की, एसभीपी र एसईओ मार्केटरले खुद्रा विक्रेताहरूलाई एआईको विस्तृत फाइदाहरू दिन्छ। उनले वर्णन गरे कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू, उनीहरूको प्रतिशत 60०% सम्ममा, उनीहरूले मोबाइल उपकरणहरूबाट खोजीहरू सुरु गर्छन्। उनी भन्छन् कि त्यहाँ कुनै डिजिटल मार्केटरहरू छैनन् जुन आफ्नो मोबाइल फोनमा खोजी गर्न व्यस्त छैन वा स्थानीय खोज ईन्जिनहरू अनुकूलन सेवाहरूको खोजीमा छैनन्।
मोबाइल फोन मार्केटिंगमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको तथ्यको बावजुद अनुसन्धानकर्ताहरू दुर्भाग्यवस एआई र भ्वाईस खोजीको प्रयोगलाई वेवास्ता गर्छन्। वर्तमानमा, अधिक र अधिक बजारहरूले आफ्नो काममा धेरै चुनौतिहरूको साथसाथै क्षेत्र मा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका छन्। शुभ समाचार यो हो कि यस मुद्दालाई समाधान गर्न मद्दतको लागि सरल तरिकाहरू छन्। सर्वप्रथम, तपाईंले ग्राहकको मनसाय बुझ्नुपर्दछ, साथै तिनीहरूको खास आवश्यकतालाई स्थानीय सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन सेवाहरू प्रयोग गरेर समयको विशेष समयमा।
खैर, केभिन बोबोव्स्की पनि विश्वास गर्दछ कि आवाज खोजीको प्रयोगले मार्केटिंग क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन ल्याउन लागेको छ किनकि यसले विक्रेताओं र सर्च इञ्जिनहरूलाई पनि प्राथमिकताहरूको अझ राम्रो समझ प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। ग्राहकहरु संग छ। साथै, त्यहाँ ग्राहकहरूको प्रकार परिवर्तन हुनेछ। उदाहरण को लागी, "न्यू योर्क बिल्डिंग्स" टाइप गर्नुको सट्टा उनीहरूले "न्यू योर्कमा मैले उत्तम दृश्य कहाँ पाउन सक्छु?" भनेर सोध्ने थिए। यो बजारलाई एक धेरै ठूलो फाइदा र अवसर हो जसले वास्तवमै उनीहरूको व्यवसाय सुधार गर्न सक्दछ र उनीहरूलाई बर्ष पैसा ठूलो रकम ल्याउँछ।
यद्यपि, यो प्रश्नमा अस्वाभाविक नै रहन्छ कि "एसईओ अभ्यासमा यसको प्रभाव के हो?" यस प्रश्नलाई दिमागमा राख्दै, मुख्य फोकस अन्य लामो-पुच्छ खोजशब्दहरूमा सारिनेछ, र यसले रणनीतिलाई सजिलो र छिटो अनुकूलित बनाउँदछ। व्यक्ति एलेक्सा र सिरी जस्ता उपकरणहरूसँग कुराकानी गर्न प्रयोग भएको छ। र नोट गर्नुहोस् कि यो कुराकानी प्राय: सामान्य प्रश्नहरूको रूपमा लिन्छ। अभ्यासमा, यसको मतलव तपाईले आफ्नो साइट सुधार गर्न सक्नुहुन्छ FAQ पृष्ठ थप गरेर वा ब्लग बनाएर सबै भन्दा लोकप्रिय प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ।